Ahlu-sunnah oo ku goodisay in ay gobolka Galguduud ka sifaynayaan Al-Shabaab, soona dhaweesay shirkii London – Radio Daljir
Ahlu-sunnah oo ku goodisay in ay gobolka Galguduud ka sifaynayaan Al-Shabaab, soona dhaweesay shirkii London
Galguduud,Feb 25 -Maamulka Ahlu-sunnah Walmeeca ayaa ku goodiyay inay deegaanada ay maamulaan ka sifeyn doonaan ururka Al-Shabaab ee dhowaan la midoobay ururka Al-Qaacidda.
Afhayeenka maamulka Ahlu-Sunah Waljameeca ee gobolada dhexe Soomaaliya Col.Cabdulahi Axmed Samatar oo waraysi siinayay Radio Daljir ayaa waxaa uu sheegay inay nabad buuxda ay ka jirto deegaanada ay maamulaan ee gobolka Galgaduud.
Waxaa uu afhayeenku tilmaamay inay is afgarad buuxda la galeen bulshooyinka degan degmooyinka Ceelbuur,Ceel garas iyo Gal hareeri sidii ay deegaanadooda uga sifeyn lahaayeen ururka Al-Shabaab ee xiligaan maamula degmooyinkaasi.
“Waanu dhamaysanay arrimihii maamulka dadwaynaha ku nool goobaha ay Al-Shabaabku maamulaan,waxaa dhiman kaliya arrinta milliteriga ee xaga amaanka ah in lagu soo celiyo degmooyinkaasi,taana waxaan rajaynaynaa hadii Allah yiraahdo mar dhow inaan qaadi doono”ayuu yiri Col.Cabdulahi Axmed Samatar.
Mar afhayeenka wax laga weydiiyay aragtida ay ka qabaan shirkii lagu soo gabagabeeyay magaalada London,ayaa waxaa uu sheegay inay soo dhoweeynayaan qodobadii kasoo baxay shirka London,balse looga baahanyahay madaxdii ka qaybgashay inay ka dhabeeyaan dhaqan galinta qodobada shirka kasoo baxay.